Wasiirka cusub ee Gaashaandhigga oo ka hadlay Tallaabooyinkiisa ugu horeeya – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Dec 2, 2017
Wasiirka cusub ee Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo todobaadkii hore xilka loo magacaabay ayaa ka hadlay qorshayaashii ugu horeeyay ee uu ku howl galayo.
Wareysi uu siiyay Warbaahinta dowladda ayuu sheegay in howsha ugu horeysay oo uu qaban doono ay noqon doonto dib u dhiska ciidamada, si loo gaari hadafkii laga lahaa.
Maxamed Mursal ayaa sheegay in xilka Wasaaradda loo magacaabay xilli adag, isagoo xusay in qof kaliya aanu wax qaban karin, balse waxqabashada ay u baahan tahay dad kale oo ku garab istaaga oo kaalmo ku noqda, isla markaana fahamsan meesha loo socdo.
“Tan ugu horeysa ee aan rabno inaan qabano waa Dib u dhiska Ciidanka, si hadafla la lahaa loo gaaro, dalka dagaal ayuu ku jiraa, waxaa burbur aad u fogaaday ku yimid ciidanka, in dib u dhis lagu sameeyo ayuu u baahan yahay, kaddibna sidii loo wajihi lahaa cadawga waqtigiisa dheeraaday”ayuu yiri Wasiirka cusub ee Wasaaradda Gaashaandhigga.
Mar wax laga weydiiyay howlaha isku dhafka ciidamada ayuu sheegay in howsha isku dhafka Ciidamada ay u baahan tahay marka hore in bulshada loo faah faahiyo, isla markaana loo sharxo ciidamada inay yihiin ciidan Soomaaliyeed oo aan dibadda laga keenin, deegaan kasta oo la geynayana ay yihiin deegaankooda
Wasiirka cusub ee Gaashaandhigga Maxamed Mursal oo aan Khibrad ciidan laheyn ayaa waxaa sugaya howlo adag oo looga baahan yahay in caqabadaha ku gadaaman uu ka gudbo.
Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay duqeynta ku socota Daacish
Saraakiil Ka Tirsan Shabaab Oo Lagu Arkay G/Gedo Iyo Diyaarada Dagaal Oo Dul Heehaabaya